Nagu saabsan - Beijing LaserTell Medical Co., Ltd.
LaserTell Technologies (UK) Co., Ltd. waa hormuudka isdhexgalka kheyraadka berrinka Lasers bilicsanaanta farsamada casriga ah.
Maanta, LaserTell Technologies (UK) Co., Ltd. waa hal-abuure weyn ee taageerada farsamada, adeegga iibka kadib, tababarka caafimaadka, suuqgeynta, iyo sidoo kale la talinta suuqyada qalliinka iyo bilicsanaanta.
Iyada oo ku saleysan 46 sano aqoonta-sida iyo cilmi-baarista suuq (20-sano-hawlgal ganacsi ganacsi, 8-sano-technology, 7-sano-marketing, 6-naqshadaynta, 5-sano adeegga), waxaan soo jiitay heer xirfadlayaal ka socda Qalabka Injineeriyada, makaanikada, elektaroniga, dhammeystirka saxda ah, daaweynta caafimaadka iyo suuqgeynta, waxayna aasaaseen shirkad hoosaad gebi ahaanba leh oo ah Beijing LaserTell Medical Co., Ltd. sanadkii 2010
Hadda Beijing LaserTell waa sumadda No.1 ee Shiinaha oo ahayd tii ugu horreysay ee soo saarta xirmooyinka buuxa ee leysarka mashiinka looga jarayo berrinka, sida 755 + 808 + 1064nm Diode Laser, CO2 Fractional Laser, SHR, E-light (IPL + RF), 755nm Alexandrite Laser, Nd: YAG Laser, iwm
Wadajir ahaan, waxaan uga jawaab qabnaa suuqyada sidii hore. Waxaan awood u siineynaa xirfadleyda inay u fidiyaan daaweyno qurux badan oo wax ku ool ah oo faa'iido iyo faa'iido leh iyo qalliin bukaanadooda, iyadoo bukaannada loo oggolaanayo inay ka faa'iideystaan ​​awoodaha casriga ah, teknoolajiyada iyo hababka caafimaad ee la caddeeyey.
OEM: Soosaarayaasha Qalabka Asalka ah; ODM: (Soosaarayaasha Naqshadaynta Asalka ah).
Beijing LaserTell Medical Co., Ltd. waxay had iyo jeer raadineysaa fikrado cusub oo wax soo saar ah.
Haddii aad raadineyso urur xirfad iyo khibrad leh oo aad iskaashi la sameyso, waxaa laga yaabaa inaan ku caawin karno.
Awoodaheena waxay daboolayaan muuqaalka dhameystiran ee photon iyo quruxda leysarka iyo alaabada caafimaadka wareegga nolosha - laga soo bilaabo fikradda bilowga ah ilaa adeegyada suuqa kadib.
Waxaan nahay dad jilicsan, waxtar leh, khibradna leh.
Haddii aad fikrad ka haysato alaab cusub, u oggolow kooxda Beijing LaserTell ee xirfadlayaal khibrad iyo khibrad u leh farsamaynta xirfadleyda ah inay kaa caawiyaan soo nooleynta nolosha.
Waxaan kaa taageereynaa wax ka qabashada su'aalaha la xiriira wax soo saarka iyo tikniyoolajiyadda.
Iyadoo Beijing LaserTell waxaad kaheli doontaa:
A. Waqtiga Degdega ah ee Suuqa
B. Maalgashiga Maaliyadeed ee Heerka ah
C. Xalal farsamo oo casri ah
D. Horumarinta Iskaashatada & Soo-saarista
Adeeg gaar ah:
1. Sixitaanka softiweerka (astaanta & naqshadeynta liiska, luqado kala duwan)
2. Naqshadeynta mashiinka gaarka ah
3. Qabashada daaweynta, naqshadeynta miirayaasha.
4. Xidhmada (qaabka, maaddada, nashqadeynta sumadda)
5. Marka loo eego miisaaniyadda, miisaanka mashiinka, cabirka, wuxuu bixiyaa mashaariic macquul ah.
Our OEM & ODM daboolayaa:
Waxaan kuu sameyn karnaa adeegga OEM iyo ODM ee mashiinnada soo socda:
1. Tikniyoolajiyad fudfudud oo xoog leh
2. E-light (IPL + RF) tiknoolajiyad
3. Q-beddelaad ND: Teknolojiyada laser YAG
4. Tiknoolajiyadda Micro-dermabrasion
5. Teknolojiyada 'Ultrasonic cavitation'
6. Tikniyoolajiyadda laysarka jajabka ah (ER: laser laser, CO2 laser)
7. Tikniyoolajiyadda timo qaadista Laser (ND garaac dheer leh: YAG laser, Diode laser)
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Opt Shr Ipl Timaha Jooji, Laser Epilator Ipl, Diode Timo Goynta Laser Guriga, 3 Gudaha 1 Ipl, Ipl Xenon Flash Siraaj, Module Laser 808, Dhammaan Alaabooyinka Qolka 308, No.12, Jingsheng South 2nd Wadada, Degmada Tongzhou, Beijing, Shiinaha